क-कसले पाउँछन् अर्को साता बेइजिङबाट ल्याइने खोप? :: Setopati
आगामी साता नेपालले कोरोनाविरूद्धको १० लाख डोज खोप चीनबाट ल्याउँदैछ। उक्त खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज असार २४ गते चीनको बेइजिङ जाँदैछ।
खोप लिएर एयरलाइन्सको जहाज भोलिपल्टै नेपाल आइपुग्ने छ। खोप आइपुग्ने भएपछि सो खोप क-कसलाई लगाउने भनेर टुंगो गर्न अहिले खोप शाखा काम गरिरहेको छ।
खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले चीनबाट ल्याइने खोप उमेर समूहको प्राथमिकताका आधारमा लगाउने तयारी भएको जानकारी दिए।
'हामी मूलत: राष्ट्रिय खोप कार्यान्वयन योजना अनुसार नै जाने भन्नेछ। जस अनुसार उमेर समूहको जोखिम हेरेर जान्छौं। यसअघि ६० वर्ष माथिका उमेर समूहलाई लगायौं। अब त्यो भन्दा कम उमेर समूहतिर जान्छौं,' गौतमले भने।
उनले ६० वर्ष माथिका कति व्यक्तिले अझै खोप लगाउन बाँकी रहेको भन्दै पहिलो प्राथमिकतामा ती उमेर समूहका मानिसहरू पर्ने बताए। तर यसअघि ६० वर्ष माथिका झन्डै १४ लाख मानिसले 'कोभिसिल्ड' खोप लगाएका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई दोस्रो मात्रा पनि कोभिसिल्ड नै लगाउनुपर्ने भएकाले पहिलो मात्रा लगाउनुपर्ने ६० वर्ष माथिका मानिस धेरै छैनन्।
यद्यपि पहिलो डोजमा 'कोभिसिल्ड' खोप लगाएका व्यक्तिहरूले दोस्रो डोज चीनबाट आउने 'भेरोसेल' खोप लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको भन्दै डा. गौतमले त्यसको दोस्रो मात्रा पनि 'कोभिसिल्ड' नै लगाउनुपर्ने वा सोही फर्मुलामा बनेको अर्को खोप लगाउनुपर्ने जनाए।
गौतमका अनुसार खोप पाउने दोस्रो प्राथमिकतामा ५५ वर्ष माथिका उमेर समूह हो। उनले ५५ वर्ष माथिका उमेर समूहमा कति मानिस छन् भनेर संख्या निकाल्ने काम भइरहेको भन्दै अब ६० वर्ष माथिकालाई पुगेपछि ५५ वर्ष माथिकालाई खोप लगाइने बताए।
यस्तै, अब आउने खोप अत्यावश्यक तथा जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूलाई समेत प्राथमिकताका आधारमा लगाइने गौतम बताउँछन्।
यसअघि पेट्रोलियम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले खोपको माग गरेका थिए। उनीहरूले सरकारले खोप उपलब्ध नगराए सेवा नै ठप्प पार्ने समेत चेतावनी दिएका थिए।
डा. गौतमले अब आउने खोप प्राथमिकतामा त्यस्ता जोखिमका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई राखिएको जनाए।
यसअघि चीनबाट दोस्रो चरणमा अनुदानमा आएको खोप पनि सरकारले उमेर समूह अनुसार नै वितरण गरेको थियो। उक्त खोपको पहिलो मात्रा लगाउने काम सकिएको छ भने दोस्रो मात्रा आगामी असार २२ गतेदेखि लगाइने भएको छ।
सो खोप सुरूमा ६० देखि ६४ वर्षकालाई लगाउने भनिए पनि पछि खोप नपुग्ने देखिएपछि अन्तिम समयमा उमेर समूहलाई परिवर्तन गर्दै ६२ देखि ६४ बनाइएको थियो।
चीनबाट अब आउने खोप भने सरकारले खरिद गरेको हो। यसअघि भने भारतबाट २० लाख डोज खोप किनिएको थियो। जसमध्ये १० लाख डोज खोप अझै आएको छैन। भारतबाट थप खोप आउने सम्भावना नदेखिएपछि सरकारले चीनबाट खोप ल्याउन पहल गरेको थियो। सोही अन्तर्गत १० लाख डोज खोप आउन लागेको हो।
तर यो खोप सरकारले 'नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट' मार्फत ल्याएकाले खोपको मूल्यलगायत धेरै कुरा खुलाइएको छैन।
सरकारले चीनबाट खोप खरिद गर्ने भनेपछि त्यहाँको कम्पनीले नै 'नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट' अनुसार भएमात्र खोप दिने भनेपछि सोही अनुसार नेपालले पनि सहमति जनाएको हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १८, २०७८, १५:०५:००